2m Bluetooth UHF RFID Reader Reader VH-75 - VANCH
Vavahady RFID mpamaky
Desktop RFID mpamaky
Mpanoratra RFID natambatra
Mamaky RFID Reader
Home » Product » 2m Bluetooth UHF RFID Reader Reader VH-75
Ny rafitra Windows Fiaraha RFID Reader
4 seranan-tsambo UHF RFID mpamaky mpamaky VF-747
8 seranan-tsambo UHF RFID Famandrihana mpamaky VF-787
16 seranan-tsambo UHF RFID mpamaky mpamaky VF-P16
32 seranan-tsambo UHF RFID Famandrihana mpamaky VF-P32
4 seranan-tsambo Waterproof UHF RFID Voarindra mpamaky VF-647P
Rafitra Android Fiovana RFID Reader
Android UHF RFID Famakiana mpamaky VF-S108
Rafitra Linux Namboarina RFID Reader
Linux UHF RFID Fiovam-pamakiana mpamaky VF-987
7dBi UHF RFID Tafiditra Miaraka Famakiana VI-83T
9dBi UHF RFID Tafiditra Miaraka amin'ny mpamaky VI-89
12dBi UHF RFID Tafiditra Miaraka Famakiana VI-88T
6m Bluetooth UHF RFID mpamaky kitapo VH-88
6m Bluetooth UHF RFID Miaro ny mpamaky kitapo VH-76
2m Android UHF RFID mpamaky tànana VH-C77
8m Android UHF RFID Mpamaky tànana mpamaky VH-C83
2dBi UHF RFID Mpamaky indostria VI-IR610
Dimension 180(Length)*65 (Width)*65(Height)MG
Suhu fitahirizana -25°C to70°C
Q:Iza ary isika?
A:Mihoatra antsika Shina UHF RFID Hardware mpanamboatra manana mihoatra ny 10 taona. Any Shenzhen no misy anay, tanàna akaikin'ny HongKong.
Q: Inona no vokatra vokarinao?
A: azontsika atao ny manamboatra isan-karazany ny mpamaky UHF RFID, antenne sy tag (hanaraka ny protocol ny EPC C1G2 sy ny ISO-18000 / 6C). afaka manampy anao izahay hamaha ireo karazana mpamaky rehetra, antenne sy tag.
Q: Inona no tombontsoa azonao?
A: Betsaka ny tombony azo avy aminay.
Voalohany, nifantoka tamin'ny R isika&D, vokatra, varotra sy fampiharana ny UHF RFID mpamaky, Ny antenaina UHF RFID ary UHF RFID Tag dia mihoatra ny 10 taona.
Faharoa, tsara ny mamolavola karazana vahaolana RFID ho an'ny indostria na fampiharana maro samihafa.
Fahatelo, efa namidy manerana an'izao tontolo izao ny vokatrao, miasa ho an'ny governemanta izy ireo, mpivarotra lehibe, am-pianarana, orinasam-pamokarana lehibe sy orinasa lojika ary koa mpitantana / fiarakodia sns.
fahefatra, manana mpiasa matihanina izahay ao amin'ny RFID, na inona na inona famokarana, fikarohana na injeniera na varotra.
Q: Inona no karazana mpanjifanao?
A: Amin'ny maha mpanamboatra hardware RFID azy, izahay dia miara-miasa amin'ny integrator system, mpamatsy vahaolana na orinasan'ny lozisialy IT mivantana satria afaka manome solosaina ho azy ireo izahay ary afaka mamolavola rindrambaiko sy mametraka / mametraka / mampiditra ny hardware ary rindrambaiko ho an'ny mpampiasa azy mivantana.
Q: Raha te hividy ny vokatrao aho, inona no tokony hataontsika voalohany??
A: satria ny vokatra RFID dia sarotra ny rafitra (mila fampandrosoana fanampiny), ka mila ilainao aminay ny mitaky ny tetik'asa, ohatra,
inona no entana voizina?
Inona no takian'ny famakiana??
Inona no karazana mpamaky tianao hampiasaina amin'ny tetikasanao?
Mpamaky kitay na mpamaky tànana?
Aorianay mazava tsara ny fitakianay, dia handefa datasheet anao sy teny nindramina ho anao izahay.
Rehefa avy nanamarina tsara, hirahinay aminao izahay raha mandoa vola izahay, ary handefa entana aminao izahay ASAP rehefa avy nandoa ny fandoavanao izahay.
Q: Manome rindrambaiko ve ianao??
A: tsy manana rindrambaiko fitantanana izahay, saingy manana mpamaky SDK izahay mba hisian'ny fampivoarana bebe kokoa amin'ny rindrambaiko fitantanana ankehitriny.
Q: Manao ahoana ny fotoana fandefasana anao?
A: Raha manana azy isika amin'ny tahiry, fotoana fanaterana dia 1-2 andro.
Raha tsy ampy azy ireo isika, fotoana fanaterana dia 3-10 andro, miankina amin'ny haben'ny filaminana.
Q: Inona no fanamarinan'ny vokatrao??
A: Ny vokatra avy aminay dia manana mari-pahaizana CE sy FCC.
Q: inona ny tsenanao lehibe?
A: ny tsenantsika lehibe dia Amerika Avaratra sy Amerika Atsimo, ME, Rosia, Africa sy Asia sns.
Q: Inona ny indostrian'ny UHF RFID dia ampiharina ankehitriny?
A: Ny UHF RFID dia mivoatra haingana, RFID no tena teknolojia. an'ny IOT, satria fantatsika fa tonga amintsika ny fotoana data lehibe, UHF RFID mampiasa ity tranga ity mba hamolavola haingana.
Q: inona no fomba fandoavanao
A: T / T , Western Union , Paypal , Fiantohana varotra Ali
Q: inona ny warranty
A : manana ny vokatra rehetra eto amintsika 1 garantiana herintaona raha tsy nisy olona nahatonga
Wristband Bluetooth UHF RFID Reader VH-B73
Blueltooth UHF RFID Reader Reader VH-C77P
Address:F4, Fananganana B, Fuanna Industrial Park, Longhua District, Shenzhen, Shina
VANCH ©Copyright ©2022 Zo rehetra voatokana.